Izindaba - IPHEPHA ELIKHULULEKILE ALikwazi UKUSHAYA IMBANGELA YAMANZI
Kukhona umoya itheku kanye futha
(1) abanye abasebenzisi abangawagcwalisi amanzi anele ngaphambi kokuqala kwepompo; kwesinye isikhathi amanzi abonakala sengathi ayachichima emgodini we-vent, kepha awuphendulanga i-shaft yepompo emoyeni ukuthi iphele yaphela ngokuphelele, ishiya umoya omncane useyipayipi lokungena noma uphampu
(2) nepompo lamanzi lixhumana nengxenye evundlile yenkomba yokugeleza kwamanzi yokusetshenziswa okungaphezu kuka-0.5% wentaba eyehla, ukuxhuma itheku yepompo ukuphela okuphezulu kakhulu, hhayi okuvundlile ngokuphelele. Uma utshekela phezulu, ipayipi lokungenisa lizogcina umoya, linciphise amapayipi wamanzi namaphampu endaweni engenalutho, ethinta amanzi.
(3) ukupakisha kwepompo sekugugile ngenxa yokusetshenziswa kwesikhathi eside noma ukupakisha kukhululeke kakhulu, okwenza inani elikhulu lamanzi likhishwe esikhaleni esiphakathi kokupakisha kanye nomgodi weshaft. Ngenxa yalokhu, umoya wangaphandle ungena ngaphakathi kwepompo kusuka kulezi zikhala, Okuthinta amanzi.
(4) ipayipi lokungena ngenxa yamandla esikhathi eside angaphansi kwamanzi, izimbobo zokugqwala kodonga, umsebenzi wepompo lamanzi ngemuva kokuncipha kwamanzi, lapho le mibobo ivezwa emanzini, umoya ovela emgodini ungene epayipini lamanzi.
(5) ukuqhuma kwepayipi lendololwane, amapayipi amanzi kanye namaphampu wamanzi axhunywe esikhaleni esincane, kungenzeka enze umoya epayipini lamanzi.
Isikhathi Iposi: Apr-13-2020